मुस्लिम धर्मगुरुको जन्मदिनमा बिरामीलाई फलफूल बितरण – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:१९ English
मुस्लिम धर्मगुरुको जन्मदिनमा बिरामीलाई फलफूल बितरण
बुटवल, २४ कार्तिक । मुस्लिम धर्मगुरु पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफाको १४९४औं जन्मोत्सवको अवसरमा रजा ए मुस्तफा मस्जिद बुटवलले प्रादेशीक अस्पतालमा उपचाररत ३ सय बिरामीलाई फलफूल वितरण गरेको छ । मस्जिदले शनिबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका बिरामीहरुलाई फलफूल वितरण गरेको हो ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले अस्पतालको नयाँ बन्ने संरचनामा सबै धर्मावलम्वीको प्रार्थनाका लागि स्थानको व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने बताए । समितिका अध्यक्ष मकबुल मियाले उपचाररत बिरामीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै असहाय तथा बिरामीहरुको सहयोगका लागि आफ्नो संगठन निरन्तर लागिरहेको बताए ।
२४ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:५८ मा प्रकाशित
अहिलेसम्म कृषकले पाएनन् युरियामल	१८ श्रावण २०७७, आईतवार ०९:३५
आज मुस्लिम धर्मावलम्बीले बकर इद (इदुल जोहा) मनाउँदै	१७ श्रावण २०७७, शनिबार ०९:५०
सातै प्रदेशमा सूचना आयोग विस्तार आवश्यक: सूचना आयोग	१७ श्रावण २०७७, शनिबार ०९:४६
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार १३:११
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार १३:०७
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार १३:०२
१० प्रहरीसहित मकवानपुरमा ३७ जनामा कोरोना पुष्टि
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:५५
काठमाडौं । काठमाडौंमा भएको सुन तस्करी घटनामा फरार एकजना बाराबाट पक्राउ परेका छन् । साउन १३ गते काठमाडौंबाट फरार भएका ‘सुन तस्कर’..
काठमाडौं । तीन दिनदेखि हराइरहेका पत्रकार बलराम बानियाँ मृत फेला परेका छन् । कान्तिपुर दैनिकका सहायक–सम्पादक..